लघुवित्त कम्पनीमा मर्जर–एक्विजिसन चटारो, अहिलेसम्म कसको कुनसँग भयो सम्झौता ?
काठमाडौं : पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरुमा मर्जर तथा एक्विजिसनको चटारो देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान केही बाध्यता त केही प्रोत्साहन गरेसँगै सहकार्य गर्ने लहर चालेको हो । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको हकप्रद सेयरमा कडाई गरेको छ । तसर्थ, पुँजी बढाउन लघुवित्त कम्पनीले बोनस सेयरमा जोड दिनुपर्ने भएको छ । बोनसबाट पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिसनको बाटो रोज्नुपर्ने भएकाले सहकार्यको संख्या बढ्दो भएको हो ।
अधिकांश लघुवित्त कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई बोनस सेयर दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त कम्पनीहरुलाई ३०% भन्दा धेरै नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । यसका कारण पनि कम्पनीहरुले बोनस सेयर वितरणमा जोड दिएका छन् । पुँजी आधारसहित संस्थालाई थप सबल पार्न पनि मर्जर तथा एक्विजिसन प्राथमिकतामा परेको हो । केन्द्रीय बैंकले ९० वटा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ ।
मर्जर तथा एक्विजिसनलाई जोड दिएसँगै यो संख्या ७६ मा पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । हाल नेपाल स्टक एक्चेन्जमा ५२ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सूचीकृत रहेका छन् । तुलनात्मकरुपमा यो संख्या धेरै भएको नियामक निकायकै भनाई छ । यतिबेला राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स रोकेरै लघुवित्तहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । केन्द्रीय बैंकको योजना अनुसार नै केही लघुवित्त कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म २४ वटा लघुवित्त कम्पनी मर्जर तथा एक्विजिसनमा गइसकेका छन् । केही मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेका छन् । नयाँ तथा पुराना दुवै खालका कम्पनीहरु मर्जर प्रक्रियामा सरिक भइरहेका छन् । यता, आरम्भ चौतारी लघुवित्तको सीवाईसी लघुवित्त र शालिग्राम लघुवित्तबीच भएको मर्जर सम्झौता भंग भएको छ । २४ कम्पनी मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकको नियम अनुसार थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तको १० करोड, क्षेत्रीयस्तरको ६ करोड, ३ जिल्ले लघुवित्तको २ करोड र १ जिल्लास्तरका लघुवित्तको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यतिबेला कतिपय नयाँ कम्पनीहरु साधारण सेयर (आइपीओ) नै जारी नगरिकन मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा समेत अघि बढेका छन् ।
सुनको भाउ थोरै बढ्यो, तोलाको कति ?
नेप्सेमा २ वाणिज्य बैंक सहित १ लघुवित्तको १ करोड ८० लाख कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत
सपोर्ट लघुवित्तले चैत २० मा बोलायो एजीएम, लगानीकर्तालाई भने छैन लाभांश
१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनालाई ३% ब्याजमा पुनर्कर्जा
मिर्मिरे लघुवित्तले चैत १८ गते बोलायो एजीएम, एफपीओ जारी गर्ने